बाबुले छोरीको विवाहमा दिए अनौठो दाइजो, जन्ती र पाहुना सबै छक्क! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बाबुले छोरीको विवाहमा दिए अनौठो दाइजो, जन्ती र पाहुना सबै छक्क!
काठमाडौं। तनहुँको आँबुखैरेनीमा एक बाबुले आफ्नो छोरीको विवाहमा अनौठो दाइजो दिएका छन् । दाइजो लिनु र दिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर उनले आफ्नो छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने दाइजो स्वरुप छोरीलाई विमा पोलिसी उपहार दिएका हुन् । उनले छोरीलाई दाइजो दिन नहुने कानुनी मान्यताको पनि सम्मान हुने र छोरीको भविष्य पनि सुरक्षित हुने अचम्मको उपाय अपनाएका छन् ।
छोरीको विवाहमा उनले १० लाख रुपैयाको बिमा पोलिसी खरिद गरेर दिएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिका ३ आँबुखैरेनी निवासी भोला गंगाजुले छोरीको विवाहमा बिमा पोलिसी दिएका खरिद गरेर दिएका हुन् । बाबुको उक्त सरप्राइजले जन्ती र पाहुना सबै छक्क परेका थिए । गाजुले बुधबार छोरीको विवाह गरिदिएका हुन् ।
उनले युनियन लाईफ ईन्सुरेन्स कम्पनीको १० वर्षे एकमुष्ट भुक्तानी बिमा पोलीसी खरिद गरि छोरीलाई उपहार दिएको कम्पनीका आँबुखैरेनी शाखा प्रमुख सबिता भट्टराईले बताएका छन् । उक्त पोलीसीको प्रिमियम शुल्क ८ लाख रुपैया रहेको र २० लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम बहन हुने पनि शाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । गंगाजु युनियन लाईफ ईन्सुरेन्स कम्पनीका एजेन्सी म्यानेजर समेत हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस: टेलिकमको २५ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एफटिटिएच सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका २५ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एफटिटिएच अर्थात् ‘फाइबर टू द होम सेवा’ उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । नेपालभर विभिन्न स्थानमा तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवासमेत चलाउन मिल्ने एफटिटिएच सेवा उपलब्ध गराइरहेको तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाट वितरण प्रारम्भ गरिएको एफटिटिएच सेवालाई २५ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध हुने टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।